"Wiilkaygu Shan Bilood Ayuu Jiraa, Neefsashada Ayaa Ku Adag, Mana Doonayo Inaan Khatar Geliyo" - Gool24.Net
“Wiilkaygu Shan Bilood Ayuu Jiraa, Neefsashada Ayaa Ku Adag, Mana Doonayo Inaan Khatar Geliyo”
Kabtanka kooxda Watfrod ee Troy Deeney ayaa sheegay in aanu ku laaban doonin tababarka kooxdiisa oo uu diidi doono wax kasta oo dhacabana, waxaanu hoosta ka xariiqay in arrintu tahay mid shaqsiyeed oo la xidhiidha qoyskiisa.
Kooxaha Premier League ayaa Isniinii isku raacay inay dib u bilaabaan tababarka Salaasada Maanta, waxaana la rumaysan yahay in kulan dambe oo ay yeelan doonaan May 26 ay go’aan kama dambays ah kaga gaadhi doonaan waqtiga horyaalka dib loo bilaabayo.
Laakiin Troy Deeney waxa uu arkayaa cabsi ah in haddii uu tababarka ku laabto uu qoyskiisa u keeni karayo fayraska Korona, taas oo uu rumaysan yahay inuu khatar gelin doono nolosha wiil uu dhalay oo shan bilood jira oo haddaba qaba xanuuno kale oo ku adkeeyey neefta, waxaanu yidhi: “Waxay tahay inaanu toddobaadkan ku laabano tababarka, laakiin anigu waxaan u sheegay in aanan tegi doonin.” Ayuu si cad u yidhi Tory Deeney.
“Intii uu socday kulan aanu yeelanay, waxaan weydiiyey su’aal aad u fudud. Dadka madowga ah, kuwa Asia iyo qowmiyadaha iska-dhalka ah, waxay afar jibbaar uga nugul yihiin xanuunka kuwa kale, laba jibbaarna waxay u badan yihiin inuu waqti dheer hayo: Miyey jiraan baadhitaano dheeraad ah? Miyaa la arki karayaa wadnaha haddii uu qof dhibaato qabo?
“Anigu timaha ma xiiran karo illaa badhtamaha July, laakiin waan bixi karayaa oo waxaan sanduuqa goolka hortiisa la istaagayaa 19 qof si aan kubadda u madaxeeyo? Ma garanayo sida taasi u shaqaynayo.
“Haddii aan macluumaad la iga siinin, maxay tahay sababta sababta aan khatarta u gelinayo naftayda?”
Intaa kaddib waxa Deeney uu sheegay sababta ugu weyn ee uu go’aankan u qaatay, waxaanu yidhi: “Kaliya waxay qaadataa in hal qof uu cudurka qaado. Ma doonayo inaan gurigayga keeno – wiilkaygu wuxuu jiraa shan bilood, waxaanay dhibaato ka haysataa neefsiga.”